Eng.Yarisow “Waxaan uga mahadcelinayaa wadaniyadda bulshada G.Benaadir oo gutay waajibaadka Dastuuriga ah ee bixinta qaaraanka Qaranka” – Radio Daljir
Eng.Yarisow “Waxaan uga mahadcelinayaa wadaniyadda bulshada G.Benaadir oo gutay waajibaadka Dastuuriga ah ee bixinta qaaraanka Qaranka”
Abriil 4, 2018 10:12 b 0
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna Duqa Caasimadda Mudane Cabdirixmaan Cumar Cusman (Eng. Yarisow) ayaa ku bogaadiyey Dawladda Federaalka Soomaaliya guulaha ay ka gaartay kororka dakhliga dalka oo sadexdii bilood ee horraanta sanadkan gaarey $42.5 milyan, ahna heerkii ugu sarreeyey tan iyo bur burkii dawladdii dhexe.
Guddoomiyaha ayaa tilmaamay in kobaca dakhliga Dawladda Federaalka Soomaaliya ay saldhig u yihiin shacabka Gobolka Benaadir oo si wadaniyad leh u bixiyey canshuuraha ku waajibay, bixiyeyna dhammaan $42.5 milyan ee suurta gelinaya in Soomaaliya deynta laga cafiyo.
“Aad ayey noo farxad gelisay in Dawladda Federaalka ay ka gudubto wajigii koowaad ee shuruudaha Hay’adda Lacagta Adduunka, arrinkan oo ku yimid biseylka bulshada Gobolka Benaadir oo si wadaniyad leh u gutay waajibaadka Dastuuriga ah ee bixinta qaaraanka Qaranka oo ah waajib saaran qof kasta oo muwaadin ah.”
Guddoomiye Yarisow ayaa sidoo kale sheegay in Maamulka iyo shaqaalaha heer Gobol iyo heer Degmo ee Gobolka Benaadir ay kaalin muhiim ah ka qaateen sidii looga dhabeyn lahaa dagaalka wada jirka ah ee ka dhanka ah musuq maasuqa canshuuraatka.
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada dalka ay kaalintooda ka qaataan sidii loo soo nooleyn lahaa dakhliga Dawladda Dhexe oo udub dhexaad u ah dawladnimada iyo baahinta adeegyada asaasiga ah.
Hay’ada Lacagta Adduunka ayaa shuruud uga dhigtay Dawladda Dhexe inay kordhiyaan dakhliga si bulshada loogu adeego, tanoo fursad u siineysa in Soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay oo keeneysa in dalka maalgashi loo helo si loo hirgeliyo mashaariic horumarineed.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland oo ka qayb-galay shir looga hadlay ka hortaga nafaqo-darrada ka jirta Puntland (dhegayso)